Isenzo esingathandekiyo esingabalulekanga esiKhunjulwayo | Martech Zone
NgeCawa, ngo-Novemba 20, 2011 NgeCawa, ngo-Novemba 20, 2011 Douglas Karr
IPRRfect. Kuyahlekisa kwaye kuyintsusa ukuba ungabelani nabanye. Kudos kwiqela kwiqela UJohn St, iarhente enetalente ephuma eToronto Canada, yoku engabekiyo ividiyo ivuliwe ukufuna ukutya!
Ukuhlala ngaphezulu kwendawo yentengiso eguqukayo, john st. Uvule icandelo lokuqala lekati levidiyo. Ngemveliso, ukufota kunye nembewu yonke ngaphakathi endlwini. Zibuze, zinokwenza ntoni iividiyo zekati kwishishini lakho?